वर्षाको के मज्जा के नमज्जा ? - केवल एक प्रश्न - प्रकाशितः असार ६, २०७४ - साप्ताहिक
वर्षाको के मज्जा के नमज्जा ?
मज्जा : वर्ष दिनको पर्खाइपछि आउने वर्षा, गर्मीमा शीतलता भरिएर मनै आनन्दित हुने तथा हरियाली । नमज्जा : ढल व्यवस्थापन नगरिएको काठमाडौंको हिलो ।
सान्द्रा पुन, हेयर स्टाइलिष्ट
रोमान्स मज्जा, हिलो नमज्जा ।
गर्मीले तातेका बेला वर्षाबाट प्राप्त हुने शीतलताका अगाडि सबै नमज्जा ओझेलमा पर्छन् ।
वर्षामा भिज्न, घरको बेडमा बसेर कफी पिउन, लङ ड्राइभ जान मज्जा लाग्छ, तर काठमाडौंको हिलोचाहिँ नमज्जा ।
श्रद्धा प्रसाईं, अभिनेत्री
तातो चिया पिउन, सामान्य भिजेकी युवती र उनको भिजेको केश हेर्न मज्जा लाग्छ, हिलो देख्दा भने नमज्जा लाग्छ ।
मुठी छरेर मुरी उब्जाउने सिजन, आहा कति मज्जा, हिलो–मैलो, झरी–वर्षा, बाढी–पहिरो, यात्रामा कठिनाइ नमज्जा ।
थापा वसन्त, गीतकार
शीतलता, रोमान्टिक झरीमा आफ्नो प्रेमीको निकै याद आए जस्तो हुने । न्यानो ओछ्यानमा आफूलाई मनपर्ने चलचित्र हेर्दै मासुको परिकार खाइरहूँझैं लाग्ने । वर्षाले मेरो मुड सेक्सी र रोमान्टिक बनाउँछ । यद्यपि चिटिक्क परेर हिंड्दा जुत्ता, पहिरन अनि मेकअप बिग्रने डर । बाटोको त कुरा के गर्नु ?
ओशिन भट्टराई, अभिनेत्री
वर्षाको बेला राति झमझम पानी परेको मज्जा, अनि दिनभरि आकाश खुलेको । काठमाडौंको सडकमा दिउँसो पानी पर्दाको अवस्था पनि त अप्ठ्यारै छ । त्यसैले वर्षा त राति नै होस ।
वातावरण सफा अनि तापक्रम पनि सन्तुलित हुनु मज्जा । पानी बढी पर्दा बाटोमा हुने हिलो–पानी, पहिरो अनि बाढी नमज्जा ।
सोहित मानन्धर, अभिनेता
वर्षाले वातावरण शीतल बनाउँछ । झमझम पानी पर्दा मन परेको मानिस साथमा भए झनै मज्जा हुन्छ, तर बाइकमा कतै निस्कँदा पानी पर्‍यो भनेचाहिँ साह्रै झुर लाग्छ ।
रुझ्दै हिंडन मज्जा, तर हिंड्दा बाटोको हिलोले लुगा फोहोर बनाउँदा नमज्जा ।
पानी परेपछि काठमाडौंमा धूलो उड्दैन, त्यो मज्जा हो । पानी परेपछि बाटो हिलाम्मे हुन्छ, योचाहिँ नमज्जा ।
भिज्न मज्जा, रुझ्न नमज्जा ।